IMicrosoft izisa i-Surface Laptop ngaphandle kwenkqubo yokusebenza ye-USB C kunye neWindows S | Ndisuka mac
IMicrosoft yazisa i-Surface Laptop ngaphandle kwenkqubo yokusebenza ye-USB C kunye neWindows S
Ezo zikaRedmond zisandula ukwazisa ngeLaptop entsha yeMicrosoft, ikhompyuter encinci kwaye elula ejolise ekumeni kwii-MacBooks ezilula kakhulu ze-Apple, kodwa ikakhulu siyifumana iyimbangi enzima kwiiChannelbook. Ngale ndlela, kufuneka sibone ngaphaya kwamanani kwaye, njengoko sihlala sisitsho, amava omsebenzisi yeyona nto yenza umahluko phakathi kwenye nenye, ukongeza kwindalo apho umsebenzisi ahamba khona, kuba ukuba bane-iPhone kunye I-iPad, kuyinto eqhelekileyo ukurhalela iimveliso ze-Apple.
Ngayiphi na imeko, ukuba sijonga uyilo lweLaptop entsha yeSoftware kaMicrosoft sibona ukuba umsebenzi owenziweyo ulungile, isikrini sayo se-intshi eyi-13,5 Umlinganiso we3: 2 umlinganiso ngetekhnoloji yePixelSense eyenza ukuba ukubamba kunye nenkxaso yesitayile yongezwe kumanyathelo e-14,47 mm kwelona candelo lityebileyo kunye nobunzima obuhlengahlengisiweyo kude kube kufezekisiwe 1,25kg ubunzima, kumenze abe ngumchasi onzima ngokwenene.
Ewe kunjalo, ukongeza kuyilo kufuneka sijonge ngaphakathi kwizixhobo kwaye akudanisi nokuba. Sinesixhenxe seeprosesa zeKaby Lake ezikhoyo, I-Intel Core i5 kunye ne-i7, 4 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yesikhundla se-SSD kwimodeli esisiseko kunye nokuzimela ngokweMicrosoft ukuya kuthi ga I-14 kunye nesiqingatha seyure ekuya kufuneka ngokwenene siyibone. Ukuba sifuna i7 sinokukhetha i-1 TB yomthamo kunye ne-16 GB yememori kodwa ixabiso likwakhupha ngaphezulu.
Kodwa ukuba kukho into engalunganga ngesi sixhobo ayiyilo uyilo okanye iinkcukacha, Yiyo Windows 10 Inkqubo eyongezelelweyo ye-S ngesixhobo esinexabiso eliphezulu kwaye ngaphezulu kwako konke ukunxibelelana namazibuko. Yintoni eza kuba yiMicrosoft engqondweni yakhe ngokushiya ezi khompyuter zintsha ngaphandle kohlobo C lwe-USB port? Sinezibuko eliqhelekileyo le-USB kwaye akukho zibuko linye le-USB C. Ukuba ukongeza i-DisplayPort kunye nesixhobo sayo sokudibanisa amandla kwizixhobo ezinegama elingaphezulu.
Isigqibo sokungasebenzisi izibuko le-USB C kwaye ungongezeli ingxelo esemthethweni Windows 10 linqaku elibi. Ngokumalunga nexabiso kunye nokufumaneka kwezixhobo, kufuneka kuthiwe ngoJuni 15 ozayo iya kuthengiswa e-United States nge ixabiso elisisiseko le- $ 999.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IMicrosoft yazisa i-Surface Laptop ngaphandle kwenkqubo yokusebenza ye-USB C kunye neWindows S
Kubonakala kum ngathi ayizukuphumelela ... bendicinga ukuba izakukhuphisana kakhulu ne-chromebook kunee-Macs. Kuyadanisa noko, ngenene ...
Into esinokuyenza ngeTouch Bar kwinkqubo ye-Evernote
I-Airmail 3 ihlaziywa ngokudibanisa imisebenzi emitsha